Jamaahiirta Chelsea Oo Is-Dhiibay, Liverpool Oo Ay U Saadaaliyeen UEFA Super Cup & Sababta Dhalisay Inay Rajo La'aan Noqdaan - Gool24.Net
Jamaahiirta Chelsea Oo Is-Dhiibay, Liverpool Oo Ay U Saadaaliyeen UEFA Super Cup & Sababta Dhalisay Inay Rajo La’aan Noqdaan
Ku dhawaad laba bilood ayaa inaga xiga bilaabashada xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020 balse kulamada xilli ciyaareedkaas ee Premier League ayaa maanta lasii daayay waxaana durtaba bilaabmay doodo ka dhashay.
Liverpool iyo Norwich ayaa xilli ciyaareedkaas kulankiisa ugu horreeya ku bilaaban doona Anfield 9-ka bisha August halka kooxda horyaalka difaacanaysa ee Man City ay maalinta xigta booqan doonto West Ham United.
Si kastaba, Kulanka ugu xoogan toddobaadkaas ee xiisaha badan leh ayaa Isniinta 11-ka August ku dhex mari doona Man United iyo Chelsea gegida Old Trafford.
Chelsea ayaa la filayaa inay tababare cusub yeelato mudadaas kahor maadaama macalinkeeda haatan ee Maurizio Sarri uu kusii jeedo dhinaca kooxda dalkiisa ee Juventus.
Halyeeyga kooxda ee Frank Lampard ayaa ah midka haatan ugu cad cad ee qabsan kara shaqadaas haddiiba uu baneeyo Sarri balse waxa sidoo kale macalimiinta shaqadaas lala xidhiidhinayo kamid ah Rafael Benitez, Ralf Rangnick iyo Jose Mourinho.
Si kastaba, Kaliya saddex maalmood kaddib kulanka Man United iyo Chelsea waxa dhici doona Final-ka UEFA Super Cup oo ay Blues magaalada Istambul kula yeelan doonaan Liverpool.
Jamaahiirta Chelsea oo isticmaalayay barta Twitter-ka si ay aragtidooda kulanka Liverpool u dhiibtaan ayaa u muuqday kuwo is dhiibay.
Jamaahiirtan ayaa ka xanaaqay xaqiiqada ah in Liverpool ay haysan doonto laba cisho oo dheeri ah si ay iskugu diyaariso kulankaas iyo waliba in iyagu ay booqanayaan Man United halka Reds ay qaabili doonaan kooxda horyaalka ku cusub ee Norwich City.
Mid kamida taageerayasha aragtidooda cabiray ayaa yidhi “Anigu dhab ahaantii kama taaho arrimaha sidan oo kale ah laakiin ala muxuu gabi ahaanba kaftan yahay, Fri 9th August: Liverpool v Norwich, Sun 11th August, Man United v Chelsea, Wed 14th August: Chelsea v Liverpool, Super Cup Final, door-bidis dhammaystiran oo Liverpool ah, Kaftan”